တရုတ်နိုင်ငံက တီထွင်ထားသည့် သက်ရှိပုံတူစက်ရုပ်လေး ရေအောက်အနက်(၁,၀၂၅)မီတာအထိ ရေငုပ်ကူးခတ်နိုင် - Xinhua News Agency
ရှီးအန်း၊ စက်တင်ဘာ ၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ Northwestern Polytechnical University သုတေသီများသည် တောင်တရုတ်ပင်လယ် ရှီးဆားကျွန်းစုတွင် ငါးလိပ်စွန် သို့မဟုတ် ငါးလက်ထုံ သဏ္ဍာန်ရှိ တောင်ပံခတ် ရေအောက်တွင် ငုပ်လျှိုးသွားလာနိုင်သည့် သက်ရှိပုံတူစက်ရုပ်၏ ရေကူးစမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အလေးချိန် (၄၇၀) ကီလိုဂရမ်ရှိ ကွေးနိုင်ဆန့်နိုင်သော ပျော့ပြောင်းသည့်စက်ရုပ်သည် ရေကူးအလျှင်မြန်ဆုံး သတ္တဝါတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ငါးလိပ်စွန်၏သဏ္ဍာန်နှင့်လှုပ်ရှားပုံစံကို နမူနာယူထားခြင်းဖြစ်ရာ ရေအောက်အနက် (၁,၀၂၅)မီတာတွင် ငုပ်လျှိုးကူးခတ်သွားလာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ငါးလိပ်စွန်စက်ရုပ်လေးတွင် တွန်းကန်အားမြင့်မားခြင်း၊ ရွေ့လျားမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကောင်းမွန်ခြင်း၊ အသံငြိမ်ခြင်းနှင့်ဝန်တင်စွမ်းရည်ကြီးမားခြင်း စသည့် ထူးခြားချက်များရှိသည်။
၎င်းစက်ရုပ်အား အဏ္ဏဝါဝန်းကျင်လေ့လာရေးနှင့် ရှီးဆားကျွန်းစုရှိ အဓိက သန္တာကျောက်တန်းကြီးများတွင် ပင်လယ်ရေအောက် သိပ္ပံသုတေသနလုပ်ငန်းများ၌ အသုံးပြုနေပြီဖြစ်‌ကြောင်း သိရသည်။ （Xinhua）
GLOBALink | China’s biomimetic robot dives up to 1,025 meters in test swim
XI’AN, Sept.6(Xinhua) — Chinese researchers in Northwestern Polytechnical University have accomplishedatest swim ofabiomimetic robot in the shape ofamanta ray, or devilfish, that can flap its wings and slide underwater at China’s Xisha Islands in the South China Sea.
The 470-kilo bionic soft robot prototype modeled on the shape and motion ofamanta ray, one of the nature’s most efficient swimmers, can dive up to 1,025 meters.
Manta rays possessaunique propulsion mechanism with characteristics such as high propulsion efficiency, high mobility and stability, low noise and large load capacity.
The robot has already been used for observing the ocean environment and conducting submarine scientific investigations inamajor coral reef in the Xisha Islands.